Tontolo iainana sy kolontsaina Tsy afa-misaraka, hoy i Michel Le Dragon
Tsy afaka miresaka tontolo iainana isika raha tsy miresaka kolontsaina, hoy ny andrarezin’ny haiady malagasy, Maitre Michel Le Dragon. Tsy ny vahiny no mahalala sy miaina ny kolontsaina eto fa isika.
Hisongadina ny resaka kolontsaina mampisongadina ny faritra maro, ary horavahan’ny fampisehoana lehibe hataon’ny tarika Samoela sy Mage 4, ampian’ny mpanakanto hafa toa ny Jazz Quart, Tsilopla, Dodol. Mba hanomezana fahafaham-po ny rehetra, dia hisy ihany koa ny karazana tsenabe sy lalao samihafa ho hita mandritra ny hetsika, ary hisongadina ny fametrahana toerana hahafahana manaraka mivantana ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra. Homena vahana ao anatin’ny fampirantiana manasongadina ny faritra maro manerana ny Nosy ny resaka kolontsaina sy ny toekarana, ary tsy latsa-danja ny fampahafantarana ireo toeram-pizahantany samihafa hita eto Analamanga, eny fa hatrany amin’ny faritra hafa amin’ny maha ain’ny toekarena Malagasy ny fizahantany. Nanome toky ny hahamatihanina tanteraka ny zava-drehetra moa ny avy amin’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga na ny ORTANA, izay naneho fa maro ireo toerana kanto sy raitra na eo amin’ny resaka fomba amam-panao na ny famokarana, toa an’Ambatomanga malaza amin’ny fromazy, Talata Volonondry fantatra amin’ny fanamboarana koba,… raha ny fanazavan’i Harimisa Razafinavalona avy amin'ny ORTANA. Ho matihanina tanteraka ny tranoheva maro hoenti-maneho ny fampirantiana ara-kolontsaina sy ara-toekarena, raha ny fanazavan’i Harilala Ramanantsoa. Tsy hambakan’izany ny seho ara-java-kanto sy ara-kolontsaina, izay i Samoela no hiahy bebe kokoa azy.